INew Snapdragon 888: Iimpawu kunye neenkcukacha | I-Androidsis
I-Snapdragon 888 sele isemthethweni kwaye ifika inamandla amaninzi kwisiphelo esiphakamileyo se-2021
Eyona chipset inamandla kuyo yonke i-ecosystem ye-Android ilapha, enye ifika ukuza kubekwa esihlalweni Snapdragon 865 -Kunye neyakhe Umahluko okwahlukileyo-njengaleyo inikezela ukusebenza kakuhle. Kumbuzo, sithetha ngawo Snapdragon 888, eyayifanele ukuba iphehlelelwe kwintengiso phantsi kwegama le-Snapdragon 875, kodwa ayenzekanga njalo. Ngendlela efanayo, le iza neyona nto ibalaseleyo ukuba ibe yinkomo eya kuthi ixhobise isiphelo esiphakamileyo kunye neeflegi ukusuka kule nyanga nakuwo wonke unyaka wama-2021.
Amacandelo le chipset yeprosesa ejolise kuwo kakhulu, ukongeza kwintsebenzo ngokubanzi, yile ukufota, ukudityaniswa kwe5G kunye nokudlala. Iimpawu zayo ziyamangalisa, kwaye apha sigxininisa ii-CPU ezintsha esizichaza ngakumbi kubunzulu obungezantsi, phakathi kwezinye izinto.
Iimpawu zeQualcomm Snapdragon 888 kunye neenkcukacha zoBugcisa
Kubaqalayo, eli qhekeza litsha okanye, elinegama elingcono, iqonga leselula inobungakanani bendawo ye-5 nm, ngumgangatho omtsha esiya kuthi ngokuqinisekileyo siwubone rhoqo ekusebenzeni okuphezulu kunye neeprosesa ezifanelekileyo ze-chipset. Olu lwakhiwo luvumela ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kakhulu kunoko kunikwa ngamanye ama-SoC ee-nanometer eziphezulu, ngoko ukuzimela kukuchaphazeleka ngokuqinisekileyo. Oku kuchaphazela ubungakanani beprosesa, encinci, kunye nesantya sokudluliswa kwedatha, esiphakamileyo.
Kancinci ngakumbi, ukusebenza kunye nokusebenza kwamandla kufikelela kuma-25% aphezulu, Xa kuthelekiswa nezinye iichipsets zangaphambili zeQualcomm. Oku kungenxa yoqwalaselo olusisiseko oluziqhenyayo kwi-CPU, eyahlulahlulwe yangamaqela amathathu kwaye imi ngolu hlobo lulandelayo:
Isiseko seCortex X1 sitshixelwe kwi-2.84 GHz kunye ne-1 MB ye-L2 cache.
Iimpawu ezintathu zeCortex A78 ezivaliweyo kwi-2.4 GHz kunye ne-512 KB ye-L2 cache (nganye).
I-Quad Cortex A55 cores evalelwe kwi-1.8 GHz nge-128 KB ye-L2 cache (nganye).
Kule nto kufuneka songeze i-4 MB ekwabelwana ngayo nge-L3 cache, ngaphandle kwe-3 MB yecache yeprosesa ezinikezelwe ngokukodwa kwinkqubo.
Uyilo lweSpapdragon 888
Kwelinye icala, ngokubhekisele Adreno 660 GPU, eyinjini yemizobo ye-Snapdragon 888, uQualcomm utsho inyuke ifike kwi-35% ngokukhawuleza kune-SoC GPU eyandulelayo kwaye isebenzisa 20% yamandla angaphantsi, ekwanceda ukuzimela ukuba kungahambi emhlabeni. Ukuba songeza koku ukuba umenzi we-semiconductor uyakukubonelela ngohlaziyo lwamaxesha ngamaxesha kunye noluzimeleyo kwiprosesa, sifumanisa ukuba sijamelene ne-GPU kuninzi esinokukunika, kwaye ixesha elide.
Njengoko kwenzekile nge-Snapdragon 765G -kwaye hayi nge-Snapdragon 865-, I-Snapdragon 888 entsha iza nemodem ye5G edibeneyo, ke yonke i-smartphone ephetheyo iya kuhambelana neenethiwekhi ze5G kwihlabathi jikelele. I-Snapdragon X60 5G yimodem ekhethiweyo yokwenza lo msebenzi, kwaye, ewe, iyahambelana nenethiwekhi ye-2G, 3G kunye ne-4G LTE, kunye nezinye iindlela zonxibelelwano ezinje ngeWi-Fi 6, iWi-Fi 6E kunye I-Bluetooth 5.2.
Injini ye-AI ye-Snapdragon 888 ibizwa ngegama Hexagon 780, kwaye licandelo elijongene nokunceda ukuhamba kakuhle kuyo yonke imisebenzi kunye neenkqubo ezinxulumene neArtificial Intelligence, ukuhanjiswa nokunye. Inokuqhubekeka ukuya kwi-26 yokusebenza kweetera ngomzuzwana, nto leyo eyoyikisayo ngokubhekisele kwintsebenzo kwaye yenza intlekisa ngemisebenzi eli-15 yeetera ngomzuzwana onokufikelela kuyo uSnapdragon 865.ivelisa incinci, ngokweQualcomm.
Ngokusekwe kufota, lelinye lawona manqaku anomdla kuthi sonke, sineendaba ezimnandi ekufuneka sizibonisile. Ngeli qonga leselula, Ukurekhodwa kwesisombululo sevidiyo se-8K sele kumiselwe ngokwesiqhelo, esele sibonile ukuba siyaphunyezwa kwezinye izithuthi eziphezulu kulo nyaka. Ukurekhodwa kwevidiyo ye-4K, kwelinye icala, kungcono ngakumbi, njengoko inokuphunyezwa nge-HDR ngaxeshanye enkosi kwi-ISP (iprosesa yomfanekiso) iSpectra 580 ye-Snapdragon 888.
Nalapha Ukurekhodwa kwesisombululo sevidiyo se-4K kuyaphuculwa kwizakhelo ezili-120 ngomzuzwana, into esele siyibonile ngaphambili, kodwa ngoku ethembisa ukuba ngcono kwaye izinzile enkosi kwizibonelelo zeplatifti yeselfowuni kunye ne-ISP Spectra 580 yayo.Kuya kuba mnandi kakhulu ukubona ukuba zonke ezi zinto kunye nokuphuculwa kuchaphazela njani ukuziqhelanisa xa ifika ekuthatheni iifoto, esiza kuthi kungekudala sizifumanise.
Kwicandelo lokudlala, kukho ukungqinelana namazinga aphezulu okuhlaziya ukuya kuthi ga kwi-144 Hz, into ebaluleke ngokukodwa kwimidlalo yokulwa edabini, nangona kusekho enye enokusebenza ngeli nqanaba lokuhlaziya, kodwa ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesinye siya kufumana uhlaziyo lokuLuthatha Uncedo lwenkqubo yokusebenza kunye nokubonelela ngamava angcono okudlala. Kananjalo ezinye iingxaki ezinje ngokulindeleka kunye nokuphendula kwebala zilungisiwe; Apha sikubalaselisa oko Impendulo ethambileyo iya kuphucula i-10% kwimidlalo ye-120fps, i-15% kwimidlalo ye-90fps, kunye ne-20% kwimidlalo ye-60fps.
Kwelinye icala, i-Snapdragon 888 ikwanayo neprosesa yayo yezokhuseleko ethi, ngokomenzi wayo, iya kujonga ubumfihlo nokhuseleko ngalo lonke ixesha, ukulungiselela ukubethela ngokufihlakeleyo ukhuseleko lomsebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 888 sele isemthethweni kwaye ifika inamandla amaninzi kwisiphelo esiphakamileyo se-2021
I-Disney kunye neVodafone zidibanisa ukwenza iNeo, iswatchwatch yabantwana